अन्जु् पन्तको विवादित तस्बिर, यस्तो रहेछ वास्तविकता – News Portal of Global Nepali
अन्जु् पन्तको विवादित तस्बिर, यस्तो रहेछ वास्तविकता
3rd April 2019 मा प्रकाशित
काठमाडौं–चर्चित गायिका अञ्जु पन्त राहत वितरणको लागि बाइबल समेत बोकेर बारा पुगेको दाबीसहितको तस्बिर बुधबार भाइरल बन्यो ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बाइबल र केही राहत सामग्री बोकेर पन्त बारा पुगेको दाबी गर्दै धमाधम विरोध गर्न थालेपछि हामीले यसको बास्तविकता खोतल्ने प्रयास गरेका छौं। के साँच्चै पन्त बारा नै पुगेकी थिइन् त ?
बुझ्दै जाँदा उनी बुधबार सिंहदरबारस्थित रेडियो नेपालको कार्यक्रममा सहभागि भएको पाइयो । त्यसो भए सामाजिक सञ्जालमा आएको तस्बिर नि ? त्यो तस्बिर अहिलेको नभएर पुरानो भएको खुलेको छ । त्यो पनि अहिले दाबी गरिएजस्तो बाइबल नभएर किताव–कापी भएको खुलेको छ ।
गत डिसेम्बर ५ मा वीरगन्ज कारागार भित्र रहेको समता स्कुलका विद्यार्र्थीहरुलाई पन्तले निःशुल्क कापी, झोला लगायत सामाग्रीहरु वितरण गरेकी थिइन् । त्यही फोटोलाई अहिले सामाजिक प्रयोगकर्ताहरुले गलत प्रचार गरेको पाइएको छ । जुन कुराको अञ्जु पन्तले नै गएको डिसेम्बर ५ मा आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत तस्बिर सार्वजनिक गरेबाट पुष्टि हुन्छ ।
हिन्दुवादी पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष उनले अञ्जु पन्तलाई नै लक्षित गर्दै ट्वीटरमार्फत भनेको छन्, ‘राहत वितरणको आवरणमा धर्म प्रचार र बाइबल बाँड्ने कार्य हुनलागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो कार्य तत्काल रोकियोस् । यसतर्फ सरकार र सम्बद्ध सबैलाई समयमा नै सचेत रहन आग्रह गर्दछु।’